प्रमाणपत्र शुल्कमा विद्यालयको मनपरी – Tanahun Khabar
Tanahun KhabarMarch 25, 2021
हरि खरेल, दुलेगौडा। तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले कुनै पनि कक्षा उत्तिर्ण गर्दा प्रमाण पत्र बापत ५ सय रुपैया भन्दा बढी लिन नपाउने नियम बनाएको छ । तर नगरपालिका अधिकांँश विद्यालयमा नगरपालिकाले तोकेको भन्दा कयौ गुणा बढी रकम असुल्ने गरेको पाइएको छ ।
नगरपालिका भित्र नाम चलेको विद्यालयहरुमा नै विद्यार्थीहरु नियममा भएको भन्दा बढी रकम तिरेर प्रमाण पत्र लिन बाध्य छन् । हालसालै कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेर प्रमाण पत्र लिएका विद्यार्थीले १५ सय देखि ३ हजारसम्म शुल्क तिर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् ।
तनहुँ खबरसँग कुरा गर्दै एक विद्यार्थीले नीजि विद्यालयमा भन्दा सामुदायिक विद्यालयमा प्रमाणपत्रको शुल्क चर्काे रहेको गुनासो गरिन् । पञ्चमुनिदेव माविबाट कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेकी ति विद्यार्थीले प्रमाण पत्र शुल्क वापत ३ हजार रुपैया तिर्नुपरेको जानकारी दिइन् ।
“हामीले प्रमाण पत्र लिएता पनि बिलमा भने सर्पाेट लेखिएको छ । खै किन हो ?” उनले अनविज्ञता जनाइन् । उनका अनुसार नीजि विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्याथीहरुले १५ सय रुपैया मात्र बुझाएको जानकारी पाएपछि आफु अलमलमा परेको बताइन् ।
यता तालबेसी माविका एक विद्यार्थीले पनि प्रमाण पत्र शुल्कमा विद्यालयहरुले मनपरी चलाउको भन्दै असन्तुष्टी ब्यक्त गरे । उनका अनुसार आफ्नो विद्यालयमा विद्यार्थीसँग प्रमाणपत्र शुल्क ३ हजार रुपैया असुल्दै आएको छ । “मैले प्रमाण पत्र त निकालि सके तर बल्ल थाहा भयो विद्यालयले ५ सय लिन पाउछ भनेर ।” उनले भने, “विद्यालयले यसको बारेमा हामीलाई केही पनि थाहा दिएन ।”
यस्तै खैरेनी माविले पनि विद्यार्थीहरुसँग तोकिएको भन्दा पाँच गुणा बढी रकम लिएको पाइएको छ । प्रमाण शुल्क बापत २५ सय रुपैयाँ लिएको विद्यालयले प्रकाशन गरेको स्मारिका समेत अनिवार्य खरिद गर्नपर्ने भन्दै विद्यार्थीहरुबाट थप २ सय लिने गरेको छ ।
खैरेनी माध्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक केशवराज घिमिरेले भने विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार शुल्क लिएको जानकारी दिए । उनले समितिले निर्णय सर्वाैपरि हुने भन्दै स्मारिक खरिद भने विद्यार्थीहरुलाई अनिवार्य नभएको बताए । घिमिरेले स्मारिक लिन नचाहने विद्यार्थीले रकम फिर्ता पाउने बताएपनि विद्यार्थीहरुले भने अनिवार्य लिनुपर्ने भन्दै रकम तिर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् ।
शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका मेयर समेत रहेका नगर शिक्षा समितिका संयोजक किसान गुरुङले विद्यालयले मनपरि शुल्क तोकेको बारेमा जानकारी नभएको भन्दै नगरको निर्णयबाट दाया वाया गर्न नपाइने स्पष्ट पारे । उनले विद्यार्थीहरुको गुनासोलाई गम्भिररुपमा लिएको बताउदै सम्वन्धित विद्यालयलाई स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी भईरहेको बताए ।
नेपाल सरकारले जति राजश्व लिन्छ त्यो भन्दा बढी प्रमाणपत्र बापत शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था रहेको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख नवराज चापागाईले जानकारी दिए । चापागाईले दिएको जानकारी अनुसार २ सय ५० नेपाल सरकारलाई राजश्व तिर्नुपर्ने र स्कुलले पनि २ सय ५० भन्दा बढी लिन नपाउने गरी पाँच सय रुपैयामा सर्टिफिकेट उपलब्ध गराउनुपर्ने नियम छ । नगर भित्र रहेका विद्यालयहरुले प्रमाणपत्र दिदा नियमविपरीत धेरै रकम लिए तुरुन्तै कारबाही गर्ने शाखा प्रमुख चापागाईले बताए ।
विद्यालयले विद्यार्थी र अभिभावकसँगको सहमतिमा नै शुल्क निर्धारण गरेर लिने गरेको पञ्चमुनिदेव माविका प्रधानाध्यापक धुर्वकुमार मल्लले बताए । नेपाल सरकारले पुरा दरबन्दी नदिएपछि त, केहि न केहि त गर्नुपर्छ भन्ने किसिमबाट अभिभावककै सल्लाह अनुसार प्रमाण पत्र बापत उक्त शुल्क निर्धारण गरिएको उनको भनाई छ ।
खैरनी माध्यामिक विद्यालय ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बुद्धिबहादुर थापाले पनि विद्यालयको आन्तरिक आम्दानी बृद्धी गरेर नीति स्रोत मार्फत शिक्षकको ब्यवस्था गर्न शुल्क बढाएको स्वीकार गरे । तर आन्तरिक शुल्क बृद्धी गर्नका लागि विद्याथीहरु माथि भर पर्नु गतल भएको शिक्षा शाखाका प्रमुख चापागाई बताउँछन् ।
“विद्यालयले निजि तहका शिक्षकहरु पाल्नु परेको छ, अरुबाट प्राप्त आयस्रोत केही छैन । नगरले यस समस्याको समाधान गरे हामी विद्यार्थीहरुबाट १ रुपैया पनि लिने थिएनौ ।” तालबेसी माविका प्रअ धुर्व केसीले भने ।
नगरपालिका भित्र झण्डै ३० विद्यालयहरु रहेका छन् । जस्मध्ये विद्यार्थीहरुले गुनासो गरेका विद्यालयहरुमा निम्नानुसार प्रमाण पत्र वापतका शुल्क निर्धारत गरेको पाइएको छ । पञ्चमुनिदेव मा.वि दुलेगौडाले रु ३ हजार, तालबेसी मा.वि घारीले रु ३ हजार, खैरेनि मा.वि खैरेनीटारले रु २५ सय, जनप्रेमि मा.वि लामागाउँले रु २५ सय, छब्दी मा.वि छब्दी देउरालिले रु २५ सय, हंश बाहिनि मा.वि कोत्रेले रु. १७ सय, गाफा मा.वि गणपते रु.१५ सय, सुर्यदय मा.विले रु. १५ सय, आधारभुत मा.वि साँखेले रु. १५ सय रुपैया प्रमाण पत्र बापत रकम लिएको सोही विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरुले प्रमाण सहित तनहुँ खबरलाई जानकारी दिए ।